नेता होइन, जनता सुधरिए पुग्छ| Janachaso Khabar
नेता होइन, जनता सुधरिए पुग्छ
हाम्रो सोचमै घुन लागेपछि परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ? परिवर्तन वा विकासको लागि पुराना निरङ्कुश सामन्ति सोच पत्तासाफ हुनु जरुरी छ ।
"हिजो चप्पल लगाउनेहरु राजा भए अनि कसरी विकास हुन्छ ? कहाँबाट पैसा आयो गाडी चढ्ने ? अण्डर एसएलसि वा दस पास गरेकाले त नेता । भोटे बुद्धिले कसरी देश विकास हुन्छ ?"
प्रतिनिधि भनाई, सुनाई हुन् समाजमा वौध्दिक विलासिता गर्ने वा चियागफमा समय बिताउने । यी भनाईका जरा के हो भने समाज र देश चलाउनेहरुसँग पैसा हुनुपर्छ । धनीले मात्रै नेता बन्नुपर्छ वा पढेकाले मात्रै देश बनाउन सक्छ । अनि खसबाहुन मात्रै बुध्दिमान हुन्छन् ।
हो, यहाँबाट हाम्रो सोचाईको जग फितलो बनेको छ । देश चलाउन समयानुसार भाँती पुर्‍याउने र सबैको इच्छाआकाङ्‍क्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने आँटी मान्छे हुनुपर्छ । ज्ञान पढेर होइन परेर उत्पन्न हुने कुरा हो ।
वास्तवमा देशको उन्नति, प्रगतिको बाधक तत्व भनेका धनीमानी र माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीको दम्भ र स्वर्थ हो । एक पटक सुख सुविधाको भोग गरेको मान्छे स्वभाविकरुपमा त्यो स्तरबाट तल ओर्लिन चाहँदैन र स्थिर रहीरहने कुरा पनि हुँदैन । स्थिर रहनका लागि उसले गलत बाटोको अवलम्बन गरेर धनसम्पत्ति जोड्नुपर्ने हुन्छ । अनि स्तर कायम राखिराख्नु पर्ने हुन्छ । ल देखाउनुस् त कुन चाहिँ सचिवस्तरको कर्मचारी गाउँ फर्केको छ ? कुन चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर गाउँ फर्केको छ ? अनि कुन व्यापारी गाउँ बसेको छ ?
त्यति मात्रै होइन तपाई हामीमा भएको सोचकै कुरा गरौं, सामान्य मान्छेमै पनि सोधी हाल्छौं गाउँ छाडेर काठमाडौं छिरेको ८/९ बर्ष भएको कोही छ भने घर कहाँ बनायौ? जग्गा कहाँ किनेको छ ?
हाँसो उठ्दो कुरा त सङ्‍घीयताको कुरा गर्ने र स्वयत्तको आन्दोलन गरेँ भनेर चिच्चाउनेहरुको दया लाग्दो नसुध्रिएको व्यवहार हो । आदिवासी आन्दोलन भनेको छ, आदिवासी बन्ने हुने भूभागमै आदिवासी रित्तो छ । पुर्ख्यौली थलो छाडेर काठमाडौं बसाइ सराई त्यहाँबाट पनि अष्ट्रेलिया,अमेरिका छिर्न लालायित छन् । दलित आन्दोलनको हबिगत उहि छ, महिला र मधेसी आन्दोलन पनि पद र सत्ताको भर्‍याङ् मात्रै । देश सङ्‍घीयतामा गयो भनिन्छ तर राजनीति पार्टीहरूको पार्टी सङ्‍रचना भने अझै केन्द्रीय छ । मै हुँ भन्ने संघस्थाले अझै केन्द्रीय सङ्‍रचनाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । भनाई र गराईमा समान्जस्यता देखिन सकेको छैन ।
जबसम्म यस्ता सोच विचारलाई सम्बोधन गरेर कज्याउने नियम कानून बनाउन सक्ने नेताहरुको अभाव हुन्छ देश यसरी नै चल्ने हो । सबैमा सत्वुद्धि आउनुपर्छ । यसको लागि नेता होइन जनता एक कप रक्सि, एक छाक भात, एक सयको रिचार्ज बिक्री नभए जाती हुन्छ । र नातावाद, कृपावाद भावना नबहकिएर बुध्दि विवेक नहराए देशको उन्नति प्रगति हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन । नेता होइन जनता सुधरिए देश समृध्दि हुन कुनै ठुलो कुरा होइन ।
उत्तम कातिच (उकुसु)
नेपाली शुद्ध लेखौँ: रु र रू मा झुक्किनुहुन्छ? आउनुहोस् द्विविधा निवारण गरौँ
जनचासो खबर| फागुन २, २०७७ आइतबार
संसद् विघटन र गलत प्रवृत्तिले निम्त्याएको नेपालको वर्तमान राजनीति परिस्थिति
जनचासो खबर| माघ २२, २०७७ बिहिबार
जीवन बीमा किन अनिवार्य छ ?
जीवन बीमा किन र कतिको गर्नु पर्छ ?
जनचासो खबर| मंसिर १६, २०७७ मंगलबार
कोरोनाकहरमा कुुडिँएको मन
जनचासो खबर| कात्तिक २, २०७७ आइतबार
नेपालमा मृत्युदण्डको कानून किन आवश्यक छ ?
जनचासो खबर| असोज १७, २०७७ शनिबार